Nikita Dragun nanao trolled noho ny voalaza fa nandrovitra ny horonantsary OG an'i Trisha Paytas 'I Got F ** ked By A Ghost' - Pop-Kolontsaina
Nikita Dragun nanao trolled noho ny voalaza fa nandrovitra ny horonantsary OG an'i Trisha Paytas 'I Got F ** ked By A Ghost'
Nikita Dragun dia niditra tao amin'ny Instagram tamin'ny 23 May mba hampiroborobo ny horonantsary vaovao mitondra ny lohateny hoe 'I Got F ** ked By A Ghost.' Na izany aza, mpampiasa maro no nahatsikaritra fa toa mahazatra loatra ilay horonantsary.
The YouTuber dia fanta-daza amin'ny tutorial momba ny makiazy mahafinaritra, izay nanangona mpanjifa efa ho 4 tapitrisa. Nanjary mpanaraka be dia be ihany koa izy tao amin'ny TikTok, miaraka amina mpanaraka 13 tapitrisa.
Na eo aza ny fiantsoany ny tenany ho 'Renin'ny Draguns' (lalao amin'ny toetran'ny Game of Thrones), ny YouTuber-nivadika-TikToker dia matetika no niaraka tamin'ny tantara an-tsehatra.
- Nikita Dragun (@NikitaDragun) 23 Mey 2021
Nikita Dragun namono an'i Trisha Paytas?
Raha ny filazan'ilay mpampianatra hatsaran-tarehy dia nanararaotra azy ny matoatoa iray tany Japon. Ao amin'ny tantarany Instagram mialoha ny lahatsariny YouTube vaovao , nilaza izy fa 'tsy mbola nifanehatra tamin'ny matoatoa' talohan'ity.
Nikita Dragun nizara ny zavatra niainany hafahafa mba hampiroboroboana ny horonantsary vaovao (Sary tamin'ny alàlan'ny Instagram)
Vetivety dia niditra tao amin'ny Twitter ny mpankafy hanesoeso an'i Nikita Dragun, fa ny sasany kosa nahatsapa fa nangalatra ny tantaran'i Trisha Paytas, izay navoakan'ity farany tao amin'ny YouTube enin-taona lasa izay miaraka amina lohateny mitovy amin'izany.
Raha ny filazan'ireo mpankafy an'i Trisha dia tsy vao sambany i Nikita Dragun no namaky ny mpampiantrano Frenemies, satria efa nilaza izy fa nanao zavatra roa hafa talohan'izay.
Trisha Paytas dia fantatra amin'ny famoahana tantara hafahafa tamin'ny andro voalohan'ny YouTube sy ny fitrandrahana ny fiainany hanao firaisana mba hahazoan'ny mpankafy bebe kokoa.
Vakio ihany koa: Mike Majlak dia nanameloka an'i Trisha Paytas noho ny bitsika momba ny lisitry ny lafitsara sy lafitsarany; nantsoin'ny Twitter
Mpankafy troll Nikita Dragun
Raha ny fahalalan'ny saika ny vondrom-piarahamonina Twitter manontolo, Nikita sy Trisha dia efa ela be izay no tsy nanao ra 'ratsy'. Ity farany aza vao tsy ela akory izay dia niantso ilay zaza 25 taona noho izy nanao «sandoka» taorian'izay miaro an'i James Charles .
ahoana no ahafantarana hoe manintona ianao
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ireo mpankafy an'i Trisha Paytas, izay manaraka an'i Nikita Dragun ihany koa, dia nahatsikaritra rehefa namoaka lohateny an-tsary nitovizany tamin'ilay horonantsary efa 33 taona ity farany. Nankany amin'ny Twitter izy ireo naneso ny kintana fanaingoana teraka Belzika, tamin'ny filazany:
Midika izany fa tsy gaga izahay, tsy afaka manao na inona na inona izy fa tsy maka tahaka ny ataon'ny olon-kafa. Fa antenaina olona tsy manan-talenta izany
- ✨ (@deadasslosingit) 24 Mey 2021
Ny zava-misy i Nikita mieritreritra fa nanao zavatra izy
- 🤍 (@munmxliz) 24 Mey 2021
Nanao izany izy :) Trisha dia tao amin'ny youtube tamin'ny taona 2007 talohan'ny iray tamin'ireo taranaka youtuber vaovao
- Josh (@opulentdaddy) 24 Mey 2021
HAHAHAHHAA NIKITA RIPPING OFF TRISHA Aorian'ny nahatongavan'izy ireo FAVE FUCK TOHARDS AZY
Fantatr'i Yikita fa mihira hira rap i Nikita miaraka amina asa N mafy sy malefaka 🤢
- Daphne $ 3,50 NY saledel Rey (@ 1niteinpari5) 24 Mey 2021
Tsy misy ifandraisany i Nikita + mpanjakavavy i Trisha pic.twitter.com/KyBwLuzNIZ
manasonia bandy tia anao nefa manandrana tsy hampiseho azy
- Alex Lores¹¹ (@_ajlores__) 24 Mey 2021
Vakio ihany koa: 'Tena leo aho amin'ny haino aman-jery': Logan Paul dia namaly ny fanoherana fanoherana fanoherana azy sy ny rahalahiny Jake Paul
Angamba diso hevitra izy momba ny hoe matoatoa va 🤦‍♂️. Raha ny voalaza dia halany fa tsy raharahiana izy.
Doctor Gryph Leto (@GryphKnight) 24 Mey 2021
Jereo i Trish mitaona aingam-panahy an'ireo zazavavy rehetra ireo! Nikita sy Gabbie dia manana harona muffin ho azy ireo noho ny archetype momba ny fahalalahana.
- Naley (@Naley___) 24 Mey 2021
Mpampiasa iray aza tonga hatramin'ny firesahana ny fisehoan'i Nikita Dragun ho 'fananahana' amin'i Trisha Paytas:
Lazao amiko fa variana amin'i Trisha ianao, nefa tsy milaza amiko fa variana amin'i Trisha ianao ..
- HoneyPeaches (@ HoneyPeaches6) 24 Mey 2021
TRISHA IREO MPITADY BLUE
maninona izy no mijery ny masoko
- plutonium (@plutonium_prax) 24 Mey 2021
Mitovy ve ny tantara raha ny tena izy sa ilay foto-kevitra ihany no mitovy? Ataovy izay rehetra afaka mamorona tantara momba ny matoatoa manadala azy ireo lmao
- ✨Lilith Goldsberry✨ (@LilGoldsberry) 24 Mey 2021
Raha ny filazan'ny mpankafy dia efa nanao izany tamin'ny YouTubers hafa i Nikita Dragun teo aloha, voalaza fa nangalatra tantara taloha ary nitantara azy ireo indray ny fahitany azy.
Mbola tsy namaly ny fanehoan-kevitra izy, ary azo inoana fa tsy hanao izany izy.
Vakio ihany koa: 'Mampiahiahy amin'ity fitoriana matavy ity': Niantso an'i Ethan Klein i Bryce Hall noho ny fitsikerany azy matetika
ahoana no ahalalako raha misy ankizivavy tia ahy miverina
ny fomba ahafahan'ny vadinao handao ilay vehivavy hafa
dia i kane ary ireo mpirahalahy mpanao asa soa
tsapako fa tsy afaka manao zavatra mety aho
ahoana ny fahitako azy